वित्तीय साक्षरता – Page 10 – Banking Khabar
सम्पत्ति शुद्धीकरणका कारण समाजमा पर्ने प्रभावहरु
गैरकानूनी रुपमा आर्जित आयलाई रुपान्तरण गर्दै वैध बनाउने प्रयासलाई सामान्य अर्थमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । यो वित्तीय कारोवारको त्यस्तो पाटो हो जसमा सामान्यतया कुनै कसूर वा आपराधिक कार्यबाट आर्जित आम्दानीलाई वैध सम्पत्तिमा बदलेर विभिन्न ढंगले कानूनी स्वरुप दिने प्रयास गरिन्छ …
बैंकमा खाता कसरी खोल्ने ? खाता खोल्दा के के चाहिन्छ ? (हेर्नुहोस् विस्तृतमा)
खाता एक प्रकारको कारोबार विवरण हो । सर्वसाधारण व्यक्ति वा संस्थाको रकम जम्मा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित व्यक्ती वा संस्थाको नाममा खाता खोलिदिने र उनीहरुको नाममा रकम राख्न र झिक्न पाइने गरी दर्ता गरिदिने विवरण नै बैंक खाता …
साधारणसभा किन गर्ने ? उत्कृष्ठ साधारणसभा कसरी गर्ने ?
साधारणसभा भन्नाले कम्पनीको शेयर पूँजीमा हक भएका शेयरवालाहरूको संयुक्त बैठक भन्ने बुझिन्छ । सामान्यतया हरेक वर्षमा एकपटक शेयरवालाहरूले कम्पनीको विविध पक्षका बारेमा छलफल गर्नका लागि औपचारिक कार्यक्रम गर्ने गरिन्छ । सोही औपचारिक कार्यक्रमलाई साधारणसभा भनिन्छ । साधारणसभालाई शेयरवालाहरूले कम्पनीको व्यवस्थापनलाई …
डेभलपमेन्ट बैंकका किसिम, काम, कर्तव्य र अधिकार
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम इजाजतपत्र लिएर काम गरेका वाणिज्य बैंकभन्दा केही साना र केही कम पुँजी परिचालन गरेका बैंकहरु ‘ख’ वर्गका बैंकहरु हुन् । यस्ता बैंकहरुलाई विकास बैंक भन्ने गरिन्छ । उनीहरुले विभिन्न उद्योग, व्यवसायहरु, तथा व्यक्ति एवं कम्पनीहरुमाथि …
शाखारहित बैंकबाट कसरी लिने सेवा ? हेर्नुहोस् विस्तृतमा
बैंकको शाखा नभएका स्थानमा सरल तथा सहज रूपमा वित्तीय पहुँच पुर्याउनका लागि ल्याइएको एक अवधारणा हो शाखारहित बैंकिङ सेवा । यसअन्तर्गत बैंकको सेवा नपुगेको स्थानमा बैंकका तर्फबाट स्थानीय व्यापारी वा सेवाग्राहीलाई अभिकर्ताका रूपमा सम्झौता गरिन्छ । अभिकर्ताले बैंकले उपलब्ध गराएको …
बैंकमा हुने जोखिम र व्यवस्थापनका उपायहरु
मृगेन्द्र नाथ रिमाल । साधारणतयाः जोखिम जीवनको हरेक पक्ष एवम् वित्तीय क्षेत्रमा खास रुपमा अन्तरनिहित हुन्छ । जोखि कुनै पनि व्यवसायमा हुने अनिश्चितता साथै वित्तीय व्यवहारलाई हाँकने मुलभूत तत्व पनि हो भन्ने बुझ्नु जरुरी हुन्छ । जोखिम सर्वव्यापी छ, त्यसकारण …
बैंकिङ कसुरबाट कसरी बच्ने ? (हेर्नुहोस् १५ बुँदामा)
बैंकिङ खबर / बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय अभ्यासजस्तै नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने केन्द्रीय बैंक छ । उसले यहाँ रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्न आफैँ त्यससम्बन्धी कानुनसमेत तयार गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले के …
ऋण लिन शाहु महाजनकोमा हैन, बैंकमै जाने गरौं
नरबहादुर थापा, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक । नेपालमा अहिले वित्तीय समावेशीताको मुद्धा चलिरहेको छ । राजनीतिक हिसाबले मूलुकमा विभिन्न आन्दोलनहरु भए । देशमा भएका आन्दोलनहरुमा सामाजिक समावेशिताका मुद्धाहरु धेरै उठे र राजनीतिक आन्दोलनले सामाजिक समावेशीताका मुद्धा सुनुवाई भएको छ । नेपालको …
नयाँ कम्पनी ऐनका सात बिशेषताहरु
व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित संशोधित कम्पनी ऐनको राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनको चरणमा छ । संसद्ले पारित गरेको सो ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । नयाँ ऐनमा भएका व्यवस्थाहरु बुँदागत रुपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ : प्रिमियममा सेयर जारी गर्न सहज यसअघिको व्यवस्थामा …
अब मोवाइलबाटै स्कूल फि तिर्न सकिने (हेरौं ई शिक्षा बारे जानकारी)
शैक्षिक संस्थाहरुलाई अत्यन्तै उपयोगी ई शिक्षा पोर्टल एक समारोहबीच प्रभु बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकुत अशोक शेरचनले हालै उद्घाटन गरे । शैक्षिक संस्थाहरुलाई प्रसाशनिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा अन्य कार्यहरुलाई ई शिक्षा पोर्टल फलदायी हुने विस्वास लिइएको छ । यो पोर्टल भारत …
बैंकहरुले झर्को नमानी सेवा दिनुपर्छ
रमेश पोख्रेल, कार्यकारी निर्देशक नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय साक्षरता आर्थिक उपार्जनसँग सम्बन्धित छ । वित्तीय चेतना नभएसम्म आर्थिक उपार्जन गर्न सकिँदैन । हामीमा पैसा कसरी कमाउने, कसरी बचत गर्ने, कहाँ प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने लगायतको ज्ञान नभएसम्म हामी आर्थिक …
डिम्याट एकाउन्ट कसरी खोल्ने (तरिकासहित)
रुपा कोइराला । धितोपत्र बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत माघ १ गतेदेखि प्राथमिक सेयर निष्काशनमा लगानी गर्न डिम्याट खाता अनिवार्य गरेको छ । यद्यपि, कतिपयलाई डिम्याट खाता के हो ? कसरी खोल्ने यो खाता ? जस्ता सामान्य सामान्य जानकारी पनि …
नेपालमा सहकारी यसरी भयो सुरुवात, यस्तो छ अबस्था (सहकारीको इतिहास)
आरपी पौडेल / सहकारी एउटा यस्तो व्यवसाय हो जहाँ संयुक्त रुपमा सदस्यहरुद्वारा आर्थिक लगानी गरी सोमा व्यवसायवाट प्राप्त मुनाफा नियामनुसार वितरण गरिन्छ । एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला, स्वायत्त, स्वतन्त्र र उद्यमशिल व्यवसायीक संगठन नै सहकारी हो । सहकारी एउटा यस्तो उद्यम …
बैंकले कसरी दिन्छ कर्जा ? (बैंकिङ कर्जाबारे महत्वपूर्ण जानकारी)
आरपी पौडेल/ रुपा कोइराला, भविष्यमा भुक्तान गर्ने गरि लिइएको रकम कर्जा वा ऋण हो । सामान्यतयाः ऋण प्रवाह बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने गर्दछ भने कर्जामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रत्याभुती पनि पर्ने गर्दछ । बैंकहरुले संकलित निक्षेप तथा पुँजी बिभिन्न क्षेत्रमा …
सम्पत्ति सुद्धिकरण के हो ? कस्तो सम्पत्ति अबैध हुन्छ ? (रिपोर्ट)
गैरकानूनी रुपमा आर्जित आयलाई रुपान्तरण गर्दै वैध बनाउने प्रयासलाई सामान्य अर्थमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । यो वित्तीय कारोबारको त्यस्तो पाटो हो जसमा सामान्यतयाः कुनै कसूर वा आपराधिक कार्यबाट आर्जित आम्दानीलाई वैध सम्पत्तिमा बदलेर विभिन्न ढंगले कानूनी स्वरुप दिने प्रयास गरिन्छ …